China Hot gbazee egbe egbe, electric ígwè mama egbe, ọkụ ikuku egbe, plastic ịgbado ọkụ egbe, tin absorber factory na-emepụta | Boda
Hot gbazee mama egbe, na ezi na-agbasa mmetụta, a dịgasị iche iche nke nozzles, nwere ike izute chọrọ nke dị iche iche mmepụta edoghi, pụrụ iche nyo imewe, eme ka nhicha na ndị ọzọ e ji mara. Igwe na-ekpo ọkụ gbazee agbaze n'ozuzu agaghị agbapụta mgbe ejiri ya na 300 ℃ ogologo oge, na nkwonkwo na-adịgide adịgide. Ya mere, na-ekpo ọkụ gbazee nrapado igwe na ọtụtụ-eji electronic factory, nri ụlọ ọrụ, nkwakọ mmepụta ihe, wdg Iji mejupụta adịghị ike nke akpaka ịgba egbe na izute mkpa nke mobile ojiji, shei nke egbe ahu ka nke ihe ndị a na-ebubata, nke nwere ike iguzogide nnukwu okpomọkụ nke 300 ℃ ma hụ na enweghị nrụrụ n'okpuru nnukwu okpomọkụ ruo ogologo oge. Ahụ egbe dị mfe na ịdị mfe ịrụ ọrụ. Nzube ngwaọrụ nchebe pụrụ iche nwere ike igbochi onye ọrụ ka ọ ghara ileba anya na-arụ ọrụ mgbe ọ na-arụ ọrụ; nkwonkwo zuru ụwa ọnụ jikọtara na teknụzụ dị elu nke Europe na-eme ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma dịgide; ịghasa, warara, ntụpọ na foogu eriri nwere ike ji mee ihe dị iche iche ọrụ
Iron soldering bụ ngwaọrụ dị mkpa maka mmezi eletriki. Ebumnuche ya bụ ịgbado ọkụ na wires. N'ụzọ dị otú a, elu nke akụkụ ndị na-ekpo ọkụ dị ọcha ma na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ na ụfọdụ okpomọkụ iji mee ka solder gbazee, na mgbasa nke ígwè ahụ na-apụta na interface ma mejupụta njikọta njikọta, ka ị wee ghọta ịgbado ọkụ nke ígwè.
Mgbe ị na-agbado ọkụ, jiri aka nri jide igwe na-ere ọkụ eletrik dị ka egosiri na fig 1-20, ma jide mmewere ma ọ bụ waya n'aka ekpe ya na mpempe imi ma ọ bụ tweezers. Tupu ịgbado ọkụ, a ga-ebucha ụzọ eletrik eletrik. A ego nke solder kwesịrị ebu na nsọtụ nke soldering ígwè isi. Tinye onu nke soldering iron nso na solder nkwonkwo. Igwe eletrik dị ihe dị ka 60 Celsius na ụgbọelu kwụ ọtọ. Iji kwado eruba nke gbazere agba si solder isi na solder nkwonkwo. The njigide oge nke soldering isi na solder nkwonkwo kwesịrị ịchịkwa n'ime 2-3 sekọnd. Welite isi igwe ahụ, aka aka ekpe ka na-ejide mmewere ahụ. Mgbe tin na nkwonkwo solder dị jụụ ma sie ike, enwere ike ịhapụ aka ekpe. Jiri tweezers iji gbanye waya ndu. Mgbe ị kwenyesiri ike na ọ naghị agbapụ, ị nwere ike belata waya na-enweghị isi na ndị na-egbutu akụkụ.
Plastic ịgbado ọkụ egbe ọtụtụ-eji mgbasa ozi ákwà, tarpaulin, waterproof akpụkpọ ahụ, mgbochi seepage liner, waterproof akpụkpọ ahụ, pipeline, electronic mmiri, ụgbọala bompa, sports n'ala, pearl owu nhazi, electroplating tank, plastic pipe, eyi / Pee / ịkwanyere efere na akpụkpọ ahụ Ọdịdị ịgbado ọkụ na ndozi nke mpaghara geomembrane.
Dọ aka na ntị!
A machibidoro iwu iji ike ọkụ mebiri emebi ma ọ bụ eriri ike maka ịgba ụgwọ; a machibidoro ya iji ya n'okpuru oke ọnọdụ ma ọ bụ na gburugburu ebe dị elu (na anwụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ụgbọ ala na-ekpo ọkụ); amachibidoro ịtọsasị batrị na tụgharịa okporo osisi ziri ezi na nke na-adịghị mma; a machibidoro ya iwu, tụọ, zọda, ma tụgharịa egbe gluu; a machibidoro ịtinye ihe ndị si mba ọzọ nke ọla n'ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ; a machibidoro ya iji batrị mpụga iji nye ike; mgbe batrị kpụchara, ọ ga-arụnyere Total ọgwụgwọ. Ngwaọrụ ekwesịghị ụmụaka ma ọ bụ ndị mmadụ nwere adịghị ike anụ ahụ ma ọ bụ nke uche, ma ọ bụ enweghị ahụmịhe na ihe ọmụma, ọ gwụla ma ha nọ n'okpuru nlekọta ma ọ bụ nkuzi; lekọta ụmụaka ka ha ghara iji akụrụngwa egwu egwu. Ọ bụrụ na eriri ike nke ngwaọrụ a mebiri emebi, ọ ga-edochi naanị onye na-eweta ọrụ anyị, nke dị mkpa dị ka ngwa ọrụ pụrụ iche na / ma ọ bụ akụkụ.
1, Biko jiri nlezianya gụọ ụkpụrụ nchekwa na nchekwa niile tupu i jiri ya. Biko debe ntuziaka a maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu.
1. Ekwela ka ndị mmadụ na-amachaghị banyere egbe ahụ ma ọ bụ ndị na-amaghị ụkpụrụ nchekwa na ntuziaka ndị a na-arụ ọrụ egbe ahụ.
2. Anaghị ekwe ụmụaka ndị n’arubeghi asatọ ọrụ ya. Gbaa mbọ hụ na mkpirisi osisi adịghị nke ụmụaka ruru asatọ. Onwere ihe egwu nke iku ume ma oburu na ilo osisi.
3. mụaka na ndị nwere ahụ ike, ihe isi ike ma ọ bụ isi mgbaka ma ọ bụ enweghị ahụmihe na ihe ọmụma anaghị ekwe ka ha jiri egbe mgbọ. Overmụaka karịrị afọ asatọ na ndị nwere ahụrụ, mmetuta ma ọ bụ ọgụgụ isi ma ọ bụ enweghị ahụmịhe na ihe ọmụma nwere ike iji egbe a ma ọ bụrụ na onye na-ahụ maka nchekwa ha na-elekọta ha ma ọ bụ na onye nkuzi kuziri ha maka iji ya. gluu egbe, ma ghọta ụkpụrụ nchekwa na ntuziaka.
4. Anaghi ekwe ka umuaka hichaa, dozie ma jiri egbe gluu n’enweghi nlezianya.
5. Lelee egbe gluu tupu ojiji ọ bụla. Ozugbo achọtara egbe gluu na akara na-akwụ ụgwọ, ha agaghị eji ya. Biko ejikwala onwe gị meghe egbe mama. Naanị ndị ọkachamara ruru eru nwere ike iji ngwa mbụ maka mmezi.
6. Mgbe e ji gbanye egbe gluu, anaghi ekwe ya ghawa.
7. Emetụla ọnụ na aka uwe silicone.
8. Naanị ndị ọkachamara ruru eru ka a na-ahapụ ka ha jiri akụkụ mbụ dị iche iche rụzie egbe gluu. Naanị n'ụzọ a ka a ga-esi hụ ọrụ nchekwa nke ngwaahịa a.
9. Anaghị anabata ya iji egbe anya mmiri mgbe ọ gbanyere ya na mmiri ma ọ bụ nwee mmiri.
10. Etinyela mkpisi n’ime oku.
2 、 Iwu nchekwa na odori
1. Ejikwala ojiji, ejila batrị ọkụ.
2. A naghị enye ya ohere ịgba ụgwọ na tebụl na-ere ọkụ (dịka akwụkwọ, akwa, akwa, wdg) ma ọ bụ na gburugburu ebe ọkụ.
3. Akwụla ụgwọ na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri.
3, Ngwaahịa na arụmọrụ nkọwa
1, egbe gluu dabara maka ihe mgbaze na-enweghị ihe mgbaze, dị ka akwụkwọ, akwụkwọ akwụkwọ, okwuchi, osisi, akpụkpọ anụ, textiles, ụfụfụ, ụfọdụ plastik, seramiiki, poselin, iko na okwute.
2. Adabara njikọta, ịrụzi, ịchọ mma na ịme ihe nlereanya.
3. Ọ na-adịghị adabara ihe na bonding okpomọkụ nke 50 degrees na n'elu.
4. Ọ na-adabara bonding akpọkwa na kpọmkwem na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri.
4 、 Ọrụ
Biko sere azụ bọtịnụ ọkụ, ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ga-agbanye.
Biko sere bọtịnụ mgba ọkụ n'ihu iji gosi na agbanyụrụ mgba ọkụ.
3. Ọ bụrụ na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-agbanyụ, ọ ga-akwụ ụgwọ n'oge. Uhie na-acha uhie uhie na-agba mgbe ị na-akwụ ụgwọ.
4. Ihe na-acha ọkụ ọkụ na-enwu mgbe niile, na-egosi na ọkụ eletrik jupụtara
5. Biko chekwaa egbe kpuchiri emechi emechi n'enweghị nsogbu mgbe ejichara ya, ma mee ka ọ dị jụụ kpamkpam tupu ịkwakọba ya. Ihe mkpuchi egbe egbe ahụ nwere ike imebi.
6. Chebe ndị mmadụ na anụmanụ pụọ na mama na-ekpo ọkụ na ọnụ. Mgbe gluu na-ekpo ọkụ na-abanye na akpụkpọ anụ, jiri mmiri mmiri saa mmiri ozugbo maka minit ole na ole. Egbula iwepu ihe na-ekpo ọkụ na akpụkpọ ahụ.
7. Naanị obere okpomọkụ gluu osisi (agbaze okpomọkụ n'etiti 100 na 150 ℃) na dayameta nke 6.8-7.2mm nwere ike iji.
8. Ejila osisi mmado di elu.
9. Ihe mmiri mmiri, mmiri mmiri na okpomọkụ dị elu metụtara, akụkụ nrapado nwere ike ịda n'onwe ha.
5 Nkwado nkwado
1. Ọnọdụ njikọ ahụ ga-adị ọcha, kpọọ nkụ na enweghị abụba.
2. Akụrụngwa nwere nrapado agaghị agba ọkụ.
3. Biko buru ụzọ nwalee itinye n'ọrụ nke ihe ọkụ ahụ site na mpempe akwụkwọ arụ ọrụ.
4. Ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ okpomọkụ nke ihe eji arụ ọrụ ga-ejikọta bụ 5 '- 50'.
5. Ihe nwere ike ime ka agbaze na-agbaze nrapado ngwa ngwa kwesịrị preheated site egbe ikuku dị ọkụ
6 、 Njikọ
7 、 Emela
8 Odida akpata na usoro ọgwụgwọ
1. Etinye roba osisi n’ime nri uzo.
2. Mepee egbe gluu ma kpoo ya maka 180 sekọnd tupu ojiji.
3. Enwere ike iji gluu site na ịpị igwe mbadamba.
4. Ozugbo ịtinye nchara ncha ọkụ na-ekpo ọkụ, pịa ihe ndị a ga-ejikọta ọnụ maka 10 ruo 30 sekọnd. Enwere ike idozi ọnọdụ njikọ.
Mgbe obi jụrụ n'ihi na ihe dị ka nkeji ise, bonding ọnọdụ nwere ike kwajuru.
5. Lezienụ anya ka ị ghara iji akụkụ ahụ ọ bụla metụta nchara agbaze agbaze n'oge a.
6. Enwere ike iji agba agba ma ọ bụ nwee agba.
1. Mgbe ịjụrụ oyi, wepụ ihe fọdụrụ na gluu na ngwaọrụ dị nro. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanye ọnọdụ njikọta ọzọ site na kpo oku.
2. Biko chekwaa egbe ahụ mechiri emechi n'enweghị nsogbu mgbe ejichara ya, ma mee ka ọ dị jụụ kpamkpam tupu ị kwakọta. Ihe mkpuchi egbe egbe ahụ nwere ike imebi.
3. Ejila ihe mgbaze na-acha ọkụ ọkụ iji mee ka ọnọdụ nkekọ dị ọcha. Enweghị ike iwepụ ihe fọdụrụ na nrapado nke nchacha ọkụ na akwa.
4. Jụụ ma chekwaa n’ebe akọrọ nke ụmụaka na-erubeghị afọ asatọ.
Nsogbu, ihe kpatara na usoro ọgwụgwọ
Nri nke gluu siri ike na egbe gluu adighi aru oku. Kpoo ọkụ nke ọma maka sekọnd 180
Nri ngwa ngwa
Batrị dị ala na-ebu batrị ahụ
Agbaze okpomọkụ nke mama osisi oke oke. Jiri mkpịsị rọba mbụ akwadoro
Mgbaze na-ekpo ọkụ na-asọpụta azụ n'ime egbe gluu. Akara nke gluu dị obere. Jiri ihe nkedo mbu nke akwadoro
Mgbe ị na-eri ike n'ike, a naghị agbaze mkpara rọba kpamkpam, wee na-eri nri mgbe agbazere mkpịsị gluu
Na njedebe nke gluing, mgbe ewepụrụ egbe gluu site na ọnọdụ njikọ, a ga-akpụ "filament". Na ngwụcha nke gluing, gluu ka na-apụta. Gbanwee mmeputa gluu na njedebe nke gelatinization.
Hichapụ gluu gbazee agbaze n’oghere. Na ngwụcha nke gluing, hichaa ihe mkpuchi ahụ na ihe eji arụ ọrụ
Nke gara aga: Chain, eweli yinye, galvanized yinye, igwe anaghị agba nchara yinye, dị iche iche nkọwa
Osote: Jack, Jack kwụ, vetikal jack, hydraulic jaak
Gluu Stick Gun
Ngwunye Gun na-ekpo ọkụ
Obere Hot gbazee mama Gun